Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Ururka ONLF oo marxaladan cusub bulshada soomaaliyeed ka badbaadiyay inay iska aargoostaan- By: Xaaji M/rashiid
Maqaal: Ururka ONLF oo marxaladan cusub bulshada soomaaliyeed ka badbaadiyay inay iska aargoostaan- By: Xaaji M/rashiid
Posted by Wariye Qaran	/ September 17, 2018
urwaynaha ONLF oo marxaladan cusub bulshada soomaaliyeed ka badbaadiyay inay iska aargoostaan- By: Xaaji M/rashiid
Marka hore hadaan dareenkayga ku wajahan siday wax usocdaan idin la wadaago waa mid aad usarreeya, Rabina Cazza Wajalla waxaan waydiisanayaa inuu umadda soomaaliyeed dhexdeeda dhigo maslaxa kheyr qabta, Aamiin. Ducadaas kadib waxaa jirta oo ah mid aan lamoogayn in umada soomaaliyeed ay leedahay cadow halis ah oo maalin walba ku mashquulsan siduu ukala fogayn lahaa dadka walaalaha ah ee wadaaga diinta, dhaqanka iyo dhalashadaba. Dhanka kale way jirtaa in cadowgu qaar kamid ah riyadiisii ku guulaystay, balse waxaa taa garab socday dhawaaqa kasoo yeedhaya jabhada xoreynta ogadenya oo ahaa isu soo jiidida dadka soomaaliyeed iyo sidoo kale ku baraarujinta dhagaraha loo maleegayo.
24kii sano ee lasoo dhaafay ee halganku socday waxaa dhacay colaado farabadan oo ay abuureen kooxdii woyaanuhu taasoo aheyd inay madaxa iyo minjaha isu galiyaan dadka dhexdiisa iyo sidoo kale inay halganka u abuureen colaad. Waxaa la odhan karaa wuxuu ahaa waqti uu dhiigu qubanayo geeska afrika gaar ahaana mandiqada Ogadenya layidhaaho!. Kooxdii wayaanuhu waxay aaminsanaayeen inay sii jirayaan oo kaliya inta dhiigaasi qulqulayo, balse maalinta ay soomaalidu baraarugto uu maamulkoodu dhamaan doono.
TPLF iyo taliskeedii way dumeen, waxayse qorsheeyeen in soomaalidu isku jeedsato sidaana uu kusii socdo khidadii ay dhigeen. Nasiib awanaag fursadii ugu horreysay ee ay Jabhadu heshay waxay ka bilowday inay ku baaqdo iscafin iyo walaalnimo oo waqtigan lagama maarmaan ah. Intaasoo dhan waxaa kasii cajiibsan inay ahaayeen dadkii 24 sano lagu ugaadhsanayay dibadda iyo gudahaba, halgamayaasha naftoodii ku waayayna tiradooda haka daalin! Kuwa la jaajuusay ee la shirqoolay iyagana tiradooda haka daalin!. Wixii oo dhan dhabarkay ka tureen oo iyagaa isku xukumay inay ka tanaasulaan dhiigii halgamayaasha, waana mida guusha horseeda caadi ahaan!
Sida taariikhda lagu hayo Nabi Muxamed SCW, iyo intii raacday ayaa makka ka qaxay balse sanooyin badan kadib ayuu kusoo laabtay isagoo awood leh. Bulshadii oo aad u argagaxsan oo isle maanta waa la idinka aargoosan ayuu waydiiyay maxaad iga filanaysaan maanta?, isagoo intaa sii raaciyay- orda iska taga waxba la idiin ma haystee taasoo kadhigan cafis dhamaystiran. Hadaba waxaan leenahay madaxda Jabahaddu waxay asiibeen kheyr farabadan markay dariiqaas mareen.
Dhanka kale waxaa mudan in la ogsoonaado dhimaha dadku wuu ka qaalisan yahay dhismaha ciidanka iyo dhaqaalahaba. Quluub kala tagtay qiimo maleh xataa haday haysato hanti ama hub waawayn oo farabadan. Sidaa darteed cidii haysata umad isku meel ujeeda oo mideysan ayaa doorasho iyo dagaalba kay noqoto wax kuheli kara. Waxaa dhab ah ina baaqii Ururwaynaha ONLF iyo booqashadii gobolada ay sabab wayn unoqdeen inay bulshadii kala badbaado oo la waayo laba ruux oo iska aargoosaneysa. Hadaan sidaa la yeelina maanta xaalad kalaa joogi laheyd.
Waxaan soo jeedin lahaa in Halgamaaga ama Kaadirka jabhadu uu sii xoojiyo abaabulka iyo diyaarinta bushada soomaaliyeed maadaama oo loo lakala jarjaray qabiil, qabiil iyo gobol, gobol mudo dheerna lagu kala dhex jiray. Dadku waa wiil iyo abtigii, iyo nin iyo seedigii mana kala maarmaan ee runta haloo sheego. Goob kasta iyo warbaahin kasta waxaa wanaagsan in carabka lagu badiyo midnimada iyo qiimaha ay leedahay sidaana ay danahooda lagu fahansiiyo. Markaad si dhab ah u qiimeyso qowmiyadaha itoobiya waxay u muuqataa in lagu kala dhaqaaqi doono. Waxay qolo waliba u xusul duubaysaa inaan dib dambe loo xukumin oy iyadu danaheeda katashato. Waxaa taas kuu cadeynaya inay qolo waliba sameysatay Ciidan iyo Calan ugaar ah meel cidla ahna madhici doonaan!.
Ugu danmbayn- Guud ahaan umada soomaaliyeed ee Geeska waxaa la gudboon inay Indhaha iyo Dhagahaba furaan kana qeyb qaataan mideynta umada soomaaliyeed.